Golaha Aqalka Sare ayaa sheegay inuu wax ka bedelayo Guddiya Hoosaadkiisa – Kalfadhi
Guddiga Joogtada ah ee Golaha Aqalka Sare ayaa kulan ay Muqdisho ku yeesheen waxay ka soo saareen laba go’aan, oo kal ah in Guddiyada Golaha dib loogu noqdo, si tiradooda loo kordhiyo iyo in Ajandaha Kulanka 7-aad ee Golaha, oo berri dhici doona, uu noqdo ka doodista Sharciga Dhismaha Guddiga Ladagaalanka Musuq-maasuqa.
Kulanka waxaa shir-guddoominayey Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, kaas oo sheegay in qodobada ay Guddiga Joogtada ahi ka hadleen uu u arko kuwo muhiim ah. Si loo kordhiyo Xubnaha Guddiyada, waxa uu Guddigu sheegay in ay ka wada shaqeyn doonaan iyaga iyo Guddiga Xeer Hoosaadka ee Golaha. Si arrintaan loogu dhaqaaqo, waxa uu, sidoo kale, Goluhu sheegay iney dib ugu noqon doonaan shuruurcda u degsan.
Hindisaha Sharciga Ladagaalanka Musuq-maasuqa ee ay kukankooda berri uga doodi doonaan ayuu, sidoo kale, Goluhu sheegay in haddii ay ansixiyaan uu muhiim u noqon doono dalka. Xoghayaha Joogtada ah ee Golaha, Cali Maxamed Jaamac, ayaa yiri “haddii uu dhaqan galo sharcigan, waxaa dalka ku yaraanaya falalka wax isdaba marinta iyo xatooyada ah, kuwaas oo ragaadiyay dadka Soomaaliyeed”.